अध्याय ४८ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
म चिन्तित छु तर तिमीहरूमध्ये कति जना मसित एउटै मन र एउटै विचारको हुन सक्छौ? तिमीहरूले मेरा वचनहरूलाई ध्यानै दिँदैनौ, यस क्रममा त्यसलाई बेवास्ता गर्छौ र ध्यान केन्द्रित गर्न असफल हुन्छौ, बरु तिमीहरूका आफ्नै सतही कुराहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छौ। तिमीहरूले मेरो मेहनती वास्ता र प्रयासलाई खेर गएको कुरा ठान्छौ; के तिमीहरूको विवेक दोषी ठहरिएको छैन र? तिमीहरू अज्ञानी छौ र तिमीहरूमा तर्कशक्तिको कमी छ; तिमीहरू सबै मूर्ख हौ, अनि मलाई बिलकुल सन्तुष्ट पार्न सक्दैनौ। म सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूको निम्ति नै हुँ—तिमीहरू मेरो निम्ति कति धेरै हुन सक्छौ? तिमीहरूले मेरो अभिप्रायलाई गलत प्रकारले बुझेका छौ, र यो साँच्चिकै तिमीहरूको अन्धोपन र कामकुरालाई राम्रोसित बुझ्न नसक्ने क्षमता हो, जसले मलाई सधैँ तिमीहरूको बारेमा चिन्तित तुल्याउँछ र तिमीहरूमा समय खर्चने तुल्याउँछ। अब, तिमीहरूले आफ्‍नो कति समय ममाथि खर्च गर्न र अर्पित गर्न सक्छौ? तिमीहरूले आफैलाई अझै बढी यी प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ।
मेरो अभिप्राय पूर्ण रूपले तिमीहरूसँग नै सम्‍बन्धित छ—के तिमीहरूले यसलाई साँच्चै बुझ्यौ? यदि तिमीहरूले यसलाई साँच्चिकै बुझेका भए, तिमीहरूले मेरो अभिप्रायलाई लामो समयअघि नै बुझिसकेका हुन्थ्यौ अनि मेरो बोझलाई बुझ्‍नेथियौ। फेरि लापरवाही नहोऊ, नत्र भने तिमीहरूभित्र पवित्र आत्माले काम गर्नुहुनेछैन, जसले तिमीहरूको आत्मालाई मर्ने तुल्याउनुहुनेछ र पातालमा पठाउनुहुनेछ। के यो तिमीहरूका निम्ति अति डरलाग्दो कुरा होइन र? मैले फेरि तिमीहरूलाई याद दिलाउनुपर्ने कुनै खाँचो छैन। तिमीहरूले आफ्ना विवेकमा खोजी गर्नुपर्छ र आफैलाई सोध्नुपर्छ: म तिमीहरूको निम्ति अति दुःखित भएको हो कि तिमीहरू मप्रति धेरै ऋणी भएको हो? असल र खराबमा तिमीहरू नझुक्‍किओ; समझ रहित नहोऊ! अहिले शक्ति र नाफाको निम्ति लडाइँ लड्ने वा षडयन्त्रमा सामेल हुने समय होइन। बरु, जीवनको निम्ति यति घातक यी कुराहरूलाई तैँले चाँडै एकातिर पन्साउनुपर्छ अनि वास्तविकताभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। तँ एकदम लापरवाह छस्! तैँले मेरो हृदयलाई बुझ्न सक्दैनस् वा मेरो अभिप्रायलाई महसुस गर्न सक्दैनस्। त्यस्ता कुराहरू धेरै छन् जुन मैले नभनेको भए हुनेथियो, तर तिमीहरू कुरै नबुझ्‍ने अन्योलग्रस्त मानिसहरू हौ, त्यसैले मैले तिनीहरूलाई बारम्‍बार भन्नु परेको छ, तैपनि, तिमीहरूले अझै मेरो हृदयलाई सन्तुष्ट पार्न सकेका छैनौ।
तिमीहरूलाई एक-एक गरी गणना गर्दा, तिमीहरूमध्ये कति जनाले मेरो हृदयलाई साँच्चिकै बुझ्‍न सक्छौ?
अघिल्लो: अध्याय ४७
अर्को: अध्याय ४९